Top 10 Ego Exchange Points Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 10 Ego Exchange Points Na Europe
Ịchọta ego mgbanwe ihe na Europe pụrụ isi ike n'ihi a njem nleta. Ihe ọzọ bụ na, na ọtụtụ ebe, i nwere ike na-atụ anya na-atụfu ego na mgbanwe ego udu. Iji nyere gị aka pụta, anyị mere a ndepụta nke kasị mma ego mgbanwe ihe na Europe:
Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji ihe igwe ndọrọ ego, ọ bụ ike ịgbanwe ego na dị iche iche tụrụ n'ime obodo. E nwere ọtụtụ mgbanwe ihe nso Rome Termini, Rome isi ụgbọ okporo ígwè. Otú ọ dị, anyị nwere ike ikwu Casa del Turista, nke bụ obere ije si ebe.
Ego Exchange Na Milan
Njem na Milan na-kwesiri aga Milan Cathedral, nke a bụ ezi ego mgbanwe ebe. Lee maka mgbanwe na Piazza del Duomo, dị nnọọ a nkeji n'ebe katidral. Ọ na-anabata ndị njem akwụkwọ ndenye, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ha.
Ego Exchange Na Paris
Paris nwere na-akpali na-agbanwe ego, ndị ụfọdụ n'ime ha anọwo na n'ihi na a na narị afọ. Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ n'ime ha nso otu n'ime obodo elu-adọrọ mmasị - Arc de Triomphe. The otu anyị nwere ike ikwu bụ APS Change, na 30 Avenue de Friedland.
Ego Exchange Na Berlin
Mgbe ị nọ Berlin, na e nwere ọtụtụ ego mgbanwe tụrụ ebe ọnụego na-ezi. Otú ọ dị, anyị na-atụ aro na ị na-ele anya maka Euro Change alaka ebe maka kasị mma udu. Ị pụrụ ịhụ ha na Europa Center, nakwa dị ka Alexanderplatz Station na Berlin.
Ego Exchange Na Munich
Munich bụ a nnukwu njem nleta obodo, otú ị ga--nọgide na nwere njem nleta afia. Otú ọ dị, e nwere ndị ka ọtụtụ tụrụ ebe i nwere ike ịgbanwe ego ma na-ezi udu. Ria Money Nyefee na Ego Exchange bụ otu n'ime ha. I nwere ike ịhụ na ọ na Arnulfstrasse 1.
Ego Exchange Na London
Dị ka isi obodo nke UK na a isi njem nleta obodo, London jupụtara adabara ego mgbanwe tụrụ. Iji gbanye gị ego n'ime pound, anya n'ihi na ma Covent Garden FX ma ọ bụ Thomas Exchange Global na Leicester Square.
Ego Exchange Na Brussels
Ịchọta kacha mma ego mgbanwe tụrụ na Brussels ikpenyeneke gị onwe gị kwa ogologo ma ọ bụrụ na ị na-eso anyị Atụmatụ. Ị nwere ike ịlele na ọnụego na a mgbanwe ego na-enye gị site n'iji ya tụnyere na-ebi ndụ ka afọ ahịa ọnụego. Otú ọ dị, ịzọpụta oge, i nwere ike dị ka nke ọma isi ihe DME Change na Boulevard Adolphe Max 11.
Ego Exchange Na Basel
The Swiss were franc, nke mere na bụ ihe ị ga-mkpa n'oge ọnụnọ gị na Basel. Ọ bụrụ na ị na-aga ji ụgbọ okporo ígwè Switzerland, ị ga-abụ na-aga site na Basel Bahnhof. E nwere a Travelex mgbanwe ya nso na-enye ezi udu.
Ego Exchange Na Amsterdam
Banks na Netherlands na-emekarị nanị na-enye ego mgbanwe ọrụ ha ahịa, nke bụ kemmekpa njem. Mgbe na Amsterdam, anya n'ihi na mgbanwe itieutom na Damrak uzo. Ndị kasị ewu ewu na otu onye bụ Pott Change, nke i nwere ike ịhụ na nso Royal Obí.
Ego Exchange Na Vienna
Ị ga mkpa euro na Vienna. Ọdụ ụgbọelu na-eme njem nleta tụrụ bụ ndị kasị dịrị nchebe nhọrọ maka ego mgbanwe tụrụ. Otú ọ dị, otu n'ime ebe ndị anyị nwere ike ikwu bụ Mgbanwerịta, abụghị St. Stephens Cathedral nso ụzọ ọdụ ụgbọ oloko. Ha na-anabata ndị njem akwụkwọ ndenye, nke nwere ike ịbụ adaba ma ọ bụrụ na i nwere ha.
Na-aga na a ezumike na Europe? Ọ bụrụ na otu n'ime ndị a bụ isi European obodo bụ na gị burukwa, atụmatụ gị na njem na AKWỤKWỌ gị Train Tickets n'oge!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Top 10 Ego Exchange Points Na Europe” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmoney-exchange-points-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)